Lego Marvel Avengers ရုပ်ရှင်နှင့်နောက်ထပ် start မကြာမီလွှင့်ပါတော့မည်
08 / 08 / 2021 08 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 221 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး, Avengers, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego Avengers, Lego မှ marvel, Lego Marvel Avengers: Climate Conundrum, Lego Marvel Spider-Man: Venom အားဖြင့် Vexed, LEGO ရုပ်ရှင်, Lego Netflix, Lego Stranger Things, Marvel, Netflix နဲ့, Spider-Man, Stranger Things, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art, အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲ
မကြာသေးမီက Lego Marvel Avengers ရုပ်ရှင်သည် blockbuster နောက်ဆက်တွဲအပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Netflix streaming platform ၏ UK ဗားရှင်းသို့မကြာမီလာမည်။
အဆိုပါ Lego အုပ်စုနှင့် Netflix ၏ partnership သည်လာမည့်အပတ်များတွင် ၀ င်ရောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်နှစ်ကားနှင့် ၂၀၂၀ လှိုင်းများမှ minifigures များနှင့်ပုံစံများပါ ၀ င်သော Avengers ဇာတ်လမ်းတွဲများအပါအ ၀ င်။
Lego Marvel Avengers: Climate Conundrum သည်ပြပွဲတစ်ခုတွင်အပိုင်း ၄ ပိုင်းပါပြီးစက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် Netflix UK သို့လာမည်။ အခြားများစွာပါ ၀ င်လိမ့်မည် Lego Marvel streaming ၀ န်ဆောင်မှုအပါအ ၀ င်အထူးအစီအစဉ်များ Lego Spider-Man: Venom အားဖြင့် Vexedမရ။ စူပါဟီးရိုးစီးရီးများသည်ထိုနေ့မှာပင်ထွက်လာသည် 71031 Marvel စတူဒီယိုပထမ ဦး စွာတည်ဆောက်နေစဉ်သင်ဖျော်ဖြေမှုအချို့လိုအပ်သည် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား.
ပိုရှာနေတဲ့သူတွေ Lego စက်တင်ဘာလထက်စောပြီး Netflix UK ရှိမီဒီယာများသည် The ၏ရောက်ရှိလာမှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part Emmet and WyldStyle ၏စွန့်စားမှုများနောက်ဆက်တွဲသည် ၂၀၁၉ တွင်စတင်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ ၀ င်များသည်မကြာသေးမီကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ရှေ့သို့ထွက်လာသည်။ chilling ကိုးကား.
အဆိုပါ Lego အုပ်စုနှင့် Netflix သည်လာမည့်နှစ်တွင်ပလက်ဖောင်း၏စတုတ္ထမြောက်ရာသီကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းနိုင်သည် Stranger Things ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်ရောင်းချနေသည် 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး (အငြိမ်းစားနှင့်အတူ လျှင်မြန်စွာနီးကပ်လာသည်)၊ Hawkins မှနောက်ထပ်မော်ဒယ်များရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါ လမ်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်.
← Lego Star Wars ကြောက်စရာကောင်းသောပုံပြင်များသည်အငြိမ်းစားဇာတ်ကောင်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေသည်
တစ်ယောက်ယောက်က LEGO Super Mario Peach's Castle ကိုလုပ်ထားပြီးပြီ →